Ethopia Oo Sheegtay Inay Ciidamadeeda Kala Baxay Somalia, Asbaabaha Lala Xidhiidhiyay Iyo Kenya Oo Sheegatay Guulo Hawlgalada Ay Ka Fulisay Somalia | Araweelo News Network (Archive) -
ADDIS ABABA(ANN) Dawlada Ethiopia ayaa sheegtay inay ciidamadeeda kala baxayaan Somalia. kadib markii bishii November 2010, ay ka talaabeen ciidamadeedu xadka u ay la wadaato Somalia, isla markaana fadhiisimo Milateri ka samysteen maagaalada Beledweyne . Raysal wasaaraha Ethiopia
Meles Zenawi, ayaa u sheegay Jimcihii warfidiyeenada oo kula kulmay xarunta dalkiisa ee Addis Ababa, halkaas oo lagu soo gebagebeeyay shirkii Ururka Midawga Afrika.
Dhawaaqa ay dawladda Ethiopia ay ciidamadeeda kala baxayso Somalia ayaa kusoo beegmay. Kadib markii uu dhamaaday shirkii ay hogaamiyayaasha Midawga ku yeesheen Addis ababa, iyadoo ay hore qaar ka mid ah hogaamiyaasha Midawga Afrika uga soo horjeesteen markii ay ciidamada Ethiopia galeen Somalia bishii November ee lasoo dhaafay. Sidoo kale waxa uu dhawaaqani kusoo beegmay, iyadoo fadhiisinka ciidamada ee ciidamada Ethiopia ku lahaayeen Beledweyne lala beegsaday qarax weyn Khamiistii todobaadkan.
Hase yeeshee Meles Zenawi ayaa sheegay in ujeedada ay ciidamadoodu u tageen Somalia ay ahayd in la taageero dawladda taagta daran ee Somalia, isla markaana ay ka cabsi qabeen in uu yimaado waqti firaaqo ah, iyadoo mudada dawladda taagta daran xiligeedu dhamaad ahaa, balse ay u tageen halkaa inay caawiyaan ciidamada nabad Ilaalinta eek u sugan Somalia.
Dhinaca kale ciidamada milateriga ee Kenya ayaa soo saaray warbixin ay kaga hadlayaan mudadii sadexda bilood ahyad ee ay hawlgalada milateri ka wadeen koonfurta Somalia, waxayn sheegeen in mudo boqol maalmood ah ka wadeen hawlgaladaa oo ay sheegeen inay ku dileen boqolaal Al-shabaab ah, balse waxa ay xuseen in hawlgaladaa ay ka horyimaadeen mushkilado dhinaca cimilada ah oo hakad geliyay talaabooyinka Milateri ay ka wadaan gobolada Koonfurta Somalia.
Kenya waxay warbixintooda ku sheegtay in sadexdaa bilood hawlgalada ay kula dagaalamayeen dagaalyahanka Al-shaabaab ay dhinacooda kaga dhinteen 7 askari, isla markaana ay guulo ka gaadheen. Laakiin sheegashada dawladda Kenya ayaa u muuqata mid aan si cad u sheegayn guulo la taaban karo oo ay ka gaadheen dagaalka ay kula jiraan Al-shabaab, iyadoo duqaymo dhinaca cirka ah oo ay ciidamadoodu ka fuliyeen gobolada koonfurta ee ay hawlgalada ka wadaan ku sheegeen inay la beegsadeeb diyaaradohoodu saldhigyo ay Al-shabaab ku lahayd halkaa, balse goobaha duqaynta laga sameeyay ayaa waxyeelo kasoo gaadhay dad shacab ah oo qoxooti ah, taas oo si weyn loogu canbaareeyay ciidamada Kenya.